‘मिस नेपाल– २०२२’ खोजी शुरु - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper ‘मिस नेपाल– २०२२’ खोजी शुरु	‘मिस नेपाल– २०२२’ खोजी शुरु - MusicKhabar.com: Nepal's No. 1 Musical Newspaper ‘मिस नेपाल– २०२२’ खोजी शुरु
‘मिस नेपाल– २०२२’ खोजी शुरु
प्रकाशित: ७ बैशाख २०७९, बुधबार
काठमाडौं । ‘मिस नेपाल– २०२२’ को खोजी शुरु भएको छ । द हिडन ट्रेजरले आगामी नयाँ संस्करणका लागि मिस नेपाल–२०२२ का लागि आवेदन खुला गरेको हो ।
मिस नेपाल प्रतियोगितामा सहभागीले सोमबारदेखि वैशाख ३१ सम्म मिस नेपालको वेबसाइटमार्फत निःशुल्क आवेदन दिन सक्नेछन् । प्रतियोगितामा ५ फिट ३ इन्च उचाइ भएका १८ देखि २७ वर्षका देशभरका युवतीहरू सहभागी हुन पाउनेछन् ।
यस वर्ष ‘मिस नेपाल वर्ल्ड,’ ‘मिस नेपाल अर्थ’ र ‘मिस नेपाल इन्टरनेसनल’ गरी तीन मात्र मुख्य टाइटल रहनेछन् ।
‘मिस सुप्रानेसनल’ फ्रेन्चाइजलाई भने यस वर्ष निरन्तरता नदिइने भएको छ । यस वर्ष मिस नेपालको पेजेन्टलाई फराकिलो र देशभरबाट प्रतिनिधित्व बढाउन सातै प्रदेशमा अडिसन मिति तय गरेको अध्यक्ष दिवाकर राजकर्णिकारले बताए ।
अडिसन काठमाडौंलगायत वीरगन्ज, धरान, धनगढी, नेपालगन्ज, पोखरा र सुर्खेतमा हुनेछ । आयोजकका अनुसार काठमाडौंमा भने वैशाख ९ देखि २७ सम्म अडिसन हुनेछ । अन्य सहरमा हुने अडिसनका लागि निश्चित मिति र स्थान छिट्टै तय गरिने राजकर्णिकारले बताए ।
हिडन ट्रेजरले मिस नेपाल २०२२ को फाइनल भने असार ४ मा ललितपुरको गोदावरीस्थित नवनिर्मित सनराइज कन्भेन्सन सेन्टरमा गर्ने भएको छ ।
जेष्ठ २८ मा इसाराको एकल कमेडी शो
अभिनेत्री करिश्मा र बेनिशाको सुन्दरताको राज !
भोलिदेखि हाँस्यव्यङ्ग्य कार्यक्रम ‘कमेडी हब’ प्रसारण हुने, यस्ता छन् कलाकारहरु